လိမ္မော်ရောင် inverted ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့် | မီးဖိုချောင်သုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
လိမ္မော်ရောင် inverted ကိတ်မုန့်
မာရီယာ vazquez | | အချိုပွဲ, အသီးနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ, မုန့်ချို
အိမ်တွင်ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဘယ်တော့မျှပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။ နံနက်စာနှင့်နေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသစ်သောပေါင်းစပ်မှုအသစ်များပြုလုပ်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးများကိုပြန်လုပ်ရန်ရွေးချယ်သောအချိန်များဖြစ်သည်။ ဒီတနင်္ဂနွေကဒီ လိမ္မော်ရောင် invert ကိတ်မုန့် ငါတို့စားပွဲပေါ်မှာသိမ်းပိုက်သူ။
citrus နှင့်အချိုပွဲကိုနှစ်သက်သောသူသည်ဤကိတ်မုန့်ကိုကြိုက်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာလည်း၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်သည် ရာသီရဲ့အသီး လိမ္မော်ရောင်လို လိမ္မော်သီးအပြင်အခွံမာကြွယ်ဝစေရန်အတွက်အခွံမာများကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ငါကသစ်စေ့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းကဗာဒံသီးကိုသုံးနိုင်တယ်။ ဒါကိုသက်သေပြမလား?
ဤလိမ္မော်ရောင်ကိတ်မုန့်သည်ရာသီအလိုက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ custard သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်နှင့်အတူနံနက်စာသို့မဟုတ်အချိုပွဲအဖြစ်အစေခံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Author: မာရီယာ vazquez
အဘိတ်အချိန်: 20 မီတာ
ချက်ပြုတ်ချိန်: 50 မီတာ
စုစုပေါင်းအချိန်: ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်
၁၂၀ ဂရမ်။ သကြားဓာတ်
၁၂၅ ဂရမ်။ မုန့်ညက်၏
1 Tsp ဖုတ်မှုန့် (တော်ဝင်)
၁၅၀ ဂရမ်။ အရည်ကျိုထောပတ်
၁၂၀ ဂရမ်။ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသစ်သီး
1 Tsp လိမ္မော်ရောင် zest
ရေ 125 ml
အလွန်ပါးလွှာသောအချပ်သို့ဖြတ်2လိမ္မော်သီး
ရေကိုသကြားနဲ့အပူပေးပြီးပျော်သွားတဲ့အထိချက်ပြုတ်တယ်။ လိမ္မော်သီးများကိုထည့်ပြီးအသီးမကုန်မှီတိုင်အောင် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ ပျော့ပျောင်းသောရည်ရည် ဒါပေမယ့်ပုံသဏ္keepာန်စောင့်ရှောက်လော့။ သီးသီးသီးနဲ့သီးနှံတွေကိုသီးသန့်သီးသန့်ထားပါတယ်။
ငါတို့ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီ အရည်ကျိုထောပတ်, အခွံနှင့်သံပုရာ zest ရောမွှေပါ။
မုန့်ညက်ကိုရှင်းလိုက်တယ် နှင့်တဆေးနှင့်ဖုံးလွှမ်းလှုပ်ရှားမှုများအောင်တစ် ဦး spatula နှင့်အတူယခင်အရောအနှောထည့်ပါ။
ကျနော်တို့နှင့်အတူမှို၏အောက်ဆုံးတန်း စက္ကူဖုတ် နောက်ပြီးမီးဖိုကို ၁၉၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးပြီး၊
ငါတို့နေရာ နောက်ခံပေါ်တွင်လိမ္မော်သီး, ထူးဆန်းသောနည်းလမ်းဖြင့် - ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းသည်သင်မြင်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်။
အထက် ငါတို့မုန့်စိမ်းကိုလောင်း ကိတ်မုန့်၏နှင့်မျက်နှာပြင်ချောမွေ့။
ကျနော်တို့ 40-50 မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရမည်။
မုန့်ဖုတ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ကိတ်မုန့်ကိုအိတ်ထဲမှာအေးစေ၊ မှိုထဲမှာရှိနေသေးတယ်၊ ပြီးတော့အရမ်းအေးတဲ့အခါငါတို့ unmold နဲ့ ကျနော်တို့ရည်နှင့်အတူဆေးသုတ် သီးသန့်။
အမှုတော်ဆောင်တစ် ဦး လျှင်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » အချိုပွဲ » လိမ္မော်ရောင် inverted ကိတ်မုန့်
Dolor ALBA ORILLÁN ဟုသူကပြောသည်
အိုင်တီဖြစ်ရမည်နည်းလမ်း«« CHACHI PIRULI «»
DOLORES ALBA ORILLÁNသို့ပြန်ပြောပါ
AND ငါအိုင်တီ DONE သေးဘူးသော။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူငယ်ချင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါကြိုးစားခဲ့တယ် ဒါအရမ်းကောင်းတယ် !!!
မာရီယာ vazquez ဟုသူကပြောသည်
Graciela မင်းကြိုက်တာကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်
Maria Vazquez အားပြန်ပြောပါ